यो बेला आफ्नो आशु आफै पुस्ने हो, आफ्ना लागि आफैले गर्ने हो, हुने खानेले ठूलो आर्थिक आकांक्षा राख्नु गलत हुनेछ - Aathikbazarnews.com यो बेला आफ्नो आशु आफै पुस्ने हो, आफ्ना लागि आफैले गर्ने हो, हुने खानेले ठूलो आर्थिक आकांक्षा राख्नु गलत हुनेछ -
पर्शुराम कुँवर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड
पर्शुराम कुँवर बैकिङ्ग इतिहासमा चिनाई राख्नु पर्ने व्यक्तित्व होइन । नेपालका पूराना बैंकरहरुको अग्र पंक्तिमा उहाँको नाम आउने गर्दछ । नेपालको बैकिङ्ग प्रणालीमा ३ दर्शक भन्दा बढी विताउनु भएका पर्शुराम कुँवर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चुक्ता पूँजी भएको बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ ।
अहिले नेपाल ४०÷४५ दिन देखि लकडाउनमा छ ।
जनता घरभित्रै अदृश्य शक्तिबाट आएको रोग कोरोना भाईरस विरुद्ध लडिरहेका छन् । अत्यावश्यकका केही उद्योगधन्दा बैंक बीमा त खुलेका छन् । तर, पर्यटन, होटल बन्द नै छन् । यो लगातारको लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्दछ । बैंकले ब्याजदर घटाउन पर्ने चर्को आवाज उठेको छ । रेमिटेन्स घटेको छ । पर्यटन उद्योग त पशुपति आर्यघाटमै पुगेको देखिन्छ । यी र यस्तै विषयमा पूराना बैंकिङ्ग व्यक्तित्व एवं ग्लोवल आईएमई बैंक लिमिटेडका सीइओ पर्शुराम कुँवरसंग आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानी ।
० यो विपत र विषम अवस्थामा बैंकहरुसंग माग्नेहरुको भीड नै देखिन्छ नि ?
बैंक आफैमा व्यापर हो । नाफा बढेको छ । प्रोभिजन नदेखाई नाफा देखाउदा त वितरण मुखि नाफा देखिदैन भने माग्नेहरुलाई कसरी दिने ? अर्को कुरा अर्को वर्ष त बैंक कहाँ पुग्लान कल्पना गर्न पनि कठिन छ । यो अवधीमा बैंकहरुले कुनै शुल्क लिएका छैन, त्यो नै ठूलो राहत हो ।
व्याज, साँवा असारसम्म छुट छ । रेमिटेन्स घटेको छ । तरपनि, माग्नेहरुको भीड बढेको बढै छ । साना साना लगानीकर्ताहरुले खाई नखाई शेयर किनेका होलान् । उनीहरुलाई २ पैसा प्रतिफल दिने दायित्व हाम्रो अझै बढेको छ । यस्तै भए उनीहरुलाई चाहि के दिने ?
० ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिनु प¥यो भनी उद्योगपति र व्यापारीले भनिरहेका छन् नि ?
बैंकको नाफा छैन् । विग्रेको छ । व्यापारी वर्गले त माग्ने नै भए नि । हामी दिन सक्दैनौ । पर्यटन र होटललाई हेर्नु पर्ने छ । सहयोग गर्ने बाटो कहाँ छ ? हामी बैंक नै पीडामा छौं । व्यालेन्स बिग्रेको छ । कहाँबाट दिने ?
० राहत राज्यले दिनु पर्ने होइन र ?
राज्यलाई पत्याउने देश नै रोहिरहेका चाहि छन् । मासिक साधारण खर्च ५५ अर्ब खर्च छ । राजश्व १०÷१२ अर्ब उठेको छैन ? कामदार मजदूरलाई राहत दिने हो । सानालाई राहत छैन । ठूला हुने खानेहरुले राहत माग्ने ? संसारभरी गरिब मजदूर बिपन्नलाई राहत दिएका उदाहरण छन् । मजदूर वर्ग चुप छ । उसको कुरा सुनिदैन अनि ठूलो वडा चाहि ठूलो स्वरमा राहत मागिरहेका चाहि छन् । यो राम्रो होइन ।
० लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई चाहि कस्तो असर पार्ने देख्नु भएको छ त ?
यो कति समय जाने हो । त्यसमा भर पर्दछ । औषधी कहिले आउने हो । रोगको परिक्षण कहिले सकिने हो । यसमा भर पर्दछ । भारत, रसिया, बेलायतमा यो रोग बढेको छ । अरु देशमा चाहि क्रमश घटेको देखिन्छ । त्यसकारण पहिला रोगथाम हुनुपर्दछ । लकडाउन थपिएको थपिएै छ, स्थिति राम्रो छैन । बैशाख २३ गतेसम्म १० अर्बको हाराहारीमा राजश्व उठेको तथ्याङ्क छ । मासिक साधारण खर्च चाहि ५५ अर्ब भन्दा बढि छ । अनि अर्थतन्त्र कहाँ पुग्दछ ? गतवर्ष यहि बेला ६० अर्ब राजश्व उठेको थियो । तर, अहिले ८०÷८१ अर्बको टार्गेटमा १० अर्ब उठेको छ । अर्को कुरा आम्दानी घटेपछि माग्ने बढेको चाहि छन् ।
अर्थमन्त्रीले भन्नु भएको छ । धेरै माग्ने हो, भने कर बढाउने छु भनेर । सबै दुःखमा छन् । अर्को कुरा यो बेला दिने मजदूर, विपन्न वर्ग र दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई हो तर, उनीहरुको रेकर्ड नै छैन । बैंक खाता नै छैन । चाहेर पनि दिन सकिदैन । त्यसकारण राहत हुने खानेले पाएर माग्ने पनि ठूलो हुने खाने नै बढि भए यो चाहि सत्य हो ।
० सीइओ साब रेमिटेन्स घटेको छ । यसले बैंक र वित्तिय संस्थाको तरलतामा कस्तो असर पार्ने देख्नु भएको छ ?
गर्भनर साबले नै रेमिटेन्स घटेको बताउनु भएको छ । पैसा आएको कम छ । विश्वका प्राय जस्तो मुलुक लकडाउनमै छन् । कामदार भएका मुलुकको पनि अर्थतन्त्र हल्लिएको छ । अनि पैसा आउने कुरा गैण छ । विदेशबाट कामदार नेपाल आएको अवस्था छ । धेरै कुरा छन् । यसले बैंक र वित्तिय क्षेत्र मात्रै होइन मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कता लाने हो । त्यो समयले नै देखाउने छ । अर्को कुरा के छ भने गरिब, निमुखा, ज्यालादारी गर्ने कामदार, कम्पनीका मजदूर भोक भोकै छन् । उनीहरुलाई दिनु प¥यो । ठूलाबडालाई मात्रै दिनेकुरा सुनिन्छ । यो राम्रो होइन। ४०÷४५ लाख मजदूरलाई केही दिन प¥यो । गरिब भोकै बस्ने धनीलाई सबै छुट र राहत चाहिने यो बुझ्न गाह्रो छ ।
० अब कृषि उत्पादन बढाउदै र आत्मनिर्भर हुने कुरा पनि उठेको छ नि ?
भनिन्छ ४०÷४५ लाख कामदार छन् । उनीहरुले के गर्दै छन् ? विदेश गएर फकिएर आएका छन््, राजधानी छोडेर घरमा पुगेका छन् । यो दक्ष जनशक्तिलाई कृषिमा लगाउनु अब चाहि जरुरी छ । आफ्नै देशमा केही गरिनु पर्दछ । काम ठूलो सानो हुँदैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । अब बजेटमा सरकारले कृषिका कार्यक्रम ल्याउनु प¥यो आयात घटाउदै खाद्यान्नमा हामी निर्भर हुनु जरुरी छ । आधुनिक कृषि विधी अपनाउनु पर्दछ ।
राज्यले कृषि उत्पादन किन्छु भन्ने वित्तिकै कृषिका उत्पादन बढ्ने छन् । रोजगार बढ्ने छ । त्यसकारण यो अवसर पनि हो । यसलाई सदुपयोग गर्दै जानु पर्दछ । साच्चै भन्दा भूपेन्द्रजी यो बेला आफ्नो आँखाको आशु आफै पुस्ने हो । आफ्ना लागि आफैले गर्ने हो । अरुले गर्दैन । यो बुझ्नु जरुरी छ । मागेर कति दिन चल्दछ । काम गरेर खाने हो । हिम्मत गर्ने हो । स्रोत जुटाउने योजना बनाउने र रोजगारी सृजना राज्यले गर्नुपर्दछ ।
० यो अप्ठ्यारो र विषम परिस्थितिलाई अवसरमा बदल्दै जानु पर्ने बेला पनि होइन र ?
यो संकटबाट पाठ सिक्दै अवसर खोजिनु पर्दछ । चुप लागेर बसेर केही हुँदैन र केही पाइदैन । यो चाहि सत्य हो । केही विदेशी मुुलुकले खाद्यान्नमा प्रतिवन्ध लगाएका छन् । अब हामीले आफै देशमा उत्पादन बढाउनु पर्दछ र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नै पर्दछ । आधारभूत खाद्यान्न उत्पादन बढाउनु पर्दछ । तरकारी, फलफूल, माछामासुको खेती बढाउनु पर्दछ । निर्यात गत वर्ष भन्दा घटेको छ, बढाउनु प¥यो । दुई तिहाई जनसंख्यालाई कृषिमा लगाउदै आधुनिक कृषिका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । त्यसका लागि राज्यले ऐन कानुन परिवर्तन गर्ने हिम्मत गर्नु प¥यो नि ।
नेपाल एसविआई बैंकलाई ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा राणा नै किन ?